Ukusebenza okuphezulu kovavanyo lodongwe lomlilo kuvavanyo lwemigodi | XTL
Ekhaya > Iimveliso > Fire Assay Crucible > Udongwe lweCrucible
Ubushushu obuphezulu obunganyangekiyo kwiLebhu yoVavanyo loMlilo lweCrucible yeGolide enyibilikayo
Uvavanyo lomlilo 's a classical analytical method for use metallurgical principles and techniques to analytical chemistry. Ukuvavanya umxholo weentsimbi ezixabisekileyo kwiminerali kunye neemveliso zentsimbi ezimiselwa ngokunyibilika nokuqhotswa. Indlela iluncedo lokumelwa kakuhle kwesampulu, ukusetyenziswa okubanzi, isiphumo esihle sokutyebisa njalo njalo.
Ubushushu bokusebenza: ≤1350 ℃ (Iqondo lobushushu bokusebenza komlilo lingaphantsi kwe-1150 degree ）
I-refractoriness ephezulu, akukho ukuqhekeka
ukuchasana kakuhle kokutya,
Ukumelana kakuhle nokothuka kwe-thermal,
akukho ntsalela ijingayo, ayinamanzi,
Uchungechunge oluqhelekileyo lungasebenzisa amaxesha angama-2-3, ukuthumela ngaphandle
series angasebenzisa 3-5 amaxesha, it's the for fire assay
Ubonelelo ngeentlobo zezinto zokuvavanywa komlilo
Imodeli eqhelekileyo kunye nenqanaba lokuthumela ngaphandle lingakhethwa
Uhlobo: Isixhobo sokuHlaziya
Ubushushu bokusebenza: ≥ 1350ºC(Iqondo lobushushu elisebenza ngovavanyo lomlilo lingaphantsi kwe-1150ºC)
Isicelo: Umzi-mveliso ongashiyiyo, ilabhoratri yovavanyo loMlilo, isityalo sokunyibilikisa, uhlalutyo lwesampulu yentsimbi.
Uphawu: Ukuchasana nomlilo okuphezulu, ukuxinana okuphezulu, ukuchasana nokugqwala okuhle, ukuxhathisa ukothuka kwe-thermal, Ubomi obude benkonzo, akukho ntsalela ijingayo, akukho kungena, akukho kuqhekeka.
Phawula:Umgangatho kunye neenkcukacha zinokwenza ngokwemfuneko.
Iimpawu ezibonakalayo kunye neekhemikhali : Ukuxhathisa umlilo ≥ 1350ºC
Ngokhuni Ubungakanani betyala (mm)
Uhlalutyo Lwentsimbi Exabisekileyo
I-crucible yokuvavanya umlilo
Izixhobo zokubumba ezizenzekelayo
Izitokhwe ezininzi, ixesha lokuhambisa malunga ne-5-10days. ngolwandle okanye ngomoya njengesicelo somthengi
Ukuhanjiswa ngexesha ngexesha ngalinye. Ukubonelela ngenkonzo ethembekileyo kunye noxanduva lomthengi ngamnye ngemveliso nganye. Injongo yethu kukwanelisa wonke umthengi ngeyona nkonzo ilungileyo.
Ixesha elide, linokusetyenziswa ngamaxesha amaninzi
Amandla omatshini aphezulu ayilelwe ukumelana nomothuko onzima we-thermal
Ifomula ekhethekileyo, inkqubo yokunyanga kunye nokucinezela
Inokumelana nemeko-bume yovavanyo lomlilo olonakalisayo
Iyakwazi ukumelana nokothuka okuphinda-phindayo ukusuka kwi-1300 degree Celsius ukuya kwiqondo lobushushu begumbi
7000 square metres workshop
Umgca wemveliso ozenzekelayo
Ubomi obude bokusebenza
Zonke iimveliso zeprototype kufuneka zidlule kwiitshekhi ezi-4 kuyo yonke inkqubo:
1. Ukuhlolwa kwezinto ezikrwada
2. Ekuhloleni inkqubo
3. Ukuhlolwa kokugqibela
4. Uhlolo oluphumayo
Izikhonkwane zethu zokuvavanya umlilo zinika ubomi obude, ukunyibilika ngokukhawuleza, isantya sokunyibilika rhoqo kunye nokuchasana okukhethekileyo kutshintsho olunobundlobongela lobushushu.
Ubushushu obuphezulu be-ceramic crucible ye-sintering encapsulted ii-pigments ezibomvu ze-ceramics
I-pigment sintered ceramic crucible inika ubomi obude, ukunyibilika ngokukhawuleza, isantya esingaguqukiyo sokunyibilika kunye nokumelana nobundlobongela kutshintsho lobushushu.Senza kwaye sinikezela nge-pigment ye-pigment ye-ceramic crucible esebenzayo ephezulu. Ingxubevange yenzululwazi yeebhetshi zemathiriyeli, ukucinezelwa ngokufanelekileyo ngeedayi ezichanekileyo, kunye namaqondo obushushu achanekileyo apho zitshiswe khona, zibonelela ngeqondo eliphezulu lokomelela komatshini ukumelana nomothuko oqatha wobushushu. Izinto ezisemgangathweni ophezulu ezisetyenziselwa ukuveliswa kwazo, kunye nemveliso elawulwa ngokucokisekileyo, iqinisekisa ukushisa okungaphezulu kwi-crucible, ngaloo ndlela inika ixabiso elingakumbi.Esona sicelo siphambili sintering encapsulted pigments ebomvu kwi-ceramics, ubungakanani obulungiselelweyo buvumelekile.Umgangatho ophezulu kunye nenkonzo ekhawulezayo yinjongo yethu.
5g/20g/30g/40g/50g/55g/65g/75g ilabhoretri yodongwe ngodongwe Isixhobo somlilo
5g/20g/30g/40g/50g/55g/65g/75g High Temperature Resistant Lab Fire Assay Udongwe crucible for isampuli ukunyibilika igolide.High refractoriness, akukho slag, akukho ukungena, akukho nokuqhekeka.
umgangatho ophezulu wegolide onyibilikayo wokuvavanya umlilo kwiilabhoratri zovavanyo lorhwebo
I-Fire Assay Ubungakanani beCrucible: 5g/20g//30g/40g/45g/50g/55g/65g/75g kunye No.8/No.8.5/9/No.9G/No.9.5 crucibles are avavalbe kwaye kananjalo senza customzied ubukhulu. Iisampulu zasimahla ziyafumaneka kuvavanyo
I-Ceramic Clay Fire Assay I-Crucible yeLebhu yokuNyibilika kwegolide kunye noHlalutyo lweMetal exabisekileyo
Izinyithi ezifunyenwe kumlilo zivavanya i-crucible ziziintsimbi eziphuma ekudityanisweni kwezinto kwiziko lokuvavanya, ukwenzela igolide, ngokuqhelekileyo kumaqondo obushushu amalunga ne-2,000 Degrees F. Indlela yokuHlola yoMlilo ineminyaka emininzi ubudala, kodwa iseyenye yezona zibalaseleyo. iindlela ezithembekileyo zokwenza uvavanyo (ukufumanisa umxholo wesinyithi we-ore) ye-ores equlethe iintsimbi ezixabisekileyo (ezihloniphekileyo) - iGolide, iSilivere kunye nePlatinam.